म्यानमारमा बीबीसी संवाददाताले के देखे? « Khasokhas Follow @khasokhasmag
अधिकारीहरुको निगरानीमा मुस्लिमहरुको यो बजारमा पत्रकारलाई जाने अनुमति दिइएको थियो
त्यसैले हामी १८ जना स्थानीय र विदेशी पत्रकारले सरकारले आयोजनालाई मङ्गडावको भ्रमणमा जाने अवसरको रुपमा उपयोग गर्यौँ। यसको अर्थ केवल ठाउँहरु हेर्नु र हामीलाई भेट्न चाहने व्यक्तिसँग मात्र भेट हुनु हो। तर त्यस्तो प्रतिबन्ध अन्तर्गत पनि कहिलेकाहीं तपाईँले महत्त्वपूर्ण भित्री कुरा पनि फेला पार्न सक्नुहुन्छ।
मङ्गडावमा रोहिंज्याका घरहरु जलाइएका छन्
पहिले हामीलाई एउटा सानो विद्यालय लगियो। जुन हिन्दु परिवारहरुको भीडले भरिएको छ। ती सबैसँग ‘मुस्लिमले आक्रमण गरिरहेको, डरले भागिरहेको’ भन्ने एकै खालको कथा छ। अस्वभाविक के भने भागेर बांग्लादेश पुगेका रुपमा हिन्दु धर्मावलम्बीहरुले आफूहरु रोहिंज्या जस्तै देखिने भएकाले स्थानीय बौद्धमार्थी रखाइनबाट आफू आक्रमणमा परेको बताएका छन्।
एकजना भिक्षुले मुस्लिमहरुले आफ्ना घर आफैंले जलाएको बताए।
हामीले सीमा सुरक्षासम्बन्धी स्थानीयमन्त्री कर्णेल फोन टिन्टसँग कुरा गर्यौं। उनले ‘बंगाली आतंकवादीले रोहिंज्या गाउँलाई कब्जामा लिएको र एक घरबाट एकजना लडाकु पठाउन बाध्य बनाएको’ बताए। उनको भनाईमा जसले त्यो कुरा अस्वीकार गर्‍यो उसका घर जलाइएका छन्। लडाकुले बारुदी सुरुङ बनाइएको र ३ वटा पुल ध्वस्त बनाएको आरोप पनि लगाए। उनले अराकान रोहिंज्या साल्भेशन आर्मीलाई बंगाली आतंकवादी भन्छन्।
दर्जनौं गाउँहरु लडाकुले ध्वस्त बनाएको भन्ने उनको भनाई हो? भनी मैले उनलाई प्रश्न गरे। उनले त्यो सरकारको धारणा भएको पुष्टि गरे। सैनिकको अत्याचारबारे गरिएको प्रश्नलाई उनले बेवास्ता गरे। उनले प्रतिप्रश्न गरे, “प्रमाण कहाँ छ?” रोहिंज्या शरणार्थीहरुतर्फ संकेत गर्दै उनको थप भनाई थियो, “ती महिलाहरुलाई हेर्नुस् जसले त्यस्तो दावी गरिरहेका छन्, के कसैले उनीहरुलाई बलात्कार गर्न खोज्ला?”
मुस्लिमहरुले आक्रमण गरिरहेको भन्दै यो तस्वीर पत्रकारहरुलाई उपलब्ध गराइएको थियो
एकजना जवान मान्छेले आफूहरु बांग्लादेश भाग्न चाहिरहेको बताए। तर तीनका नेताले अधिकारीहरुसँग त्यही बस्ने एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको जानकारी दिए। एउटा सुनसान बंगाली बजारमा मैले एकजना मानिसलाई कोसँग डराएको भनेर सोध्दा ‘सरकारसँग’ भन्ने जवाफ दिए।
मुस्लिमले आक्रमण गरिरहेको भनिएको तस्वीरकी महिला पछि हिन्दु गाउँमा भेटिएकी थिइन्।
सुरक्षासम्बन्धी स्थानीयमन्त्री कर्णेल फोन टिन्टले मुस्लिमहरुले नै आफ्नो गाउँ जलाएको दावी गरे
अलेल थान क्याव गाउँमा आगजनी गरिएको एक हप्तासम्म धूँवा निस्किरहेको थियो